बुबा गुमा-एका आदर्श मिश्राले भने : ओली एकपटक तिमीले चलाएको देश र मेरो बुबाले चलाएको स्कुल हेर ! (भिडियाे सहित)
काठमाडौँ : कमेडियन आदर्श मिश्रा यतिबेला शो’कमा छन् । मंगलबार मिर्गौ’ला पीडि’त आफ्ना बुबा विनोद मिश्राको निधन भएपछि धार्मिक विधिअनुसार मृ’त्यु संस्का’र गरिरहेका छन् ।
आदर्शले मि’र्गौला पी’डित आफ्नो बुबाको मृ’त्युको कारण, अस्पतालको अवस्था र सरकारको स्वास्थ्य नीतिलगायतका विषयलाई लिएर भावुक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
आफ्नै युटुब च्यानलमा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले
उप’चार गराइरहेका बाबुलाई बचाउन नसक्नुमा अस्प’तालको लापर’वाही र सरकारी नीतिलाई दो’ष दिएका छन् । बुबाको मृ’त्युको कारण वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पतालको लाप’रवाहीलाई पनि दो’ष दिएका छन् ।
भिडियाेमा उनले भनेका छन् : मेरो बुबाले एनएमसीमा चार बर्षदेखि डा’यलसिस गराइरहनु भएको थियो । प्रति डायलसिस ३५ सय रुपैंयाँ तिरको हो तर विरा’मीलाई समस्या परेको बेला धपाइदिने ?
‘नारायणी अस्पतालमा गत बर्ष मात्र डा’यलसिस गराइरहेका वि’रामीलाई एनएमसी पठाइएको थियो । त्यहाँ विग्रि’एको मेसिन नबनाउँदा एक महिनामा पाँच जना वि’रामीको मृ’त्यु भयो ।’ विद्यालय संचालक समेत रहेका बुबाको निधनपछि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भनेका छन् ।
उहाँले मृ’गौला फेल भएपनि सफलताका साथ स्कुल चलाउनुभएको थियो । केपी ओली एकपटक तिमीले चलाएको देश र मेरो बुबाले चलाएको स्कुल हेर । तिमी त भे’डाहरुलाई पछाडि हुल लगाएर हिडेका छौं । भारतको वि’रोध गरेर चुनाव जित्यौं ।
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार १७:४८ गते 1 Minute 552 Views
अर्जुननरसिंह केसी भन्नुहुन्छ : लु’टतन्त्रको आहालमा समृद्धि फुल्दैन ।
‘राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार निश्चल बस्नेतलाई छैन’ ।
डा.सुन्दरमणि दिक्षित भन्नुहुन्छ : अब राजतन्त्रको आवश्यकता छैन ।